Intel ၊ Nvidia နဲ့ AMD တို့ ဖြဲကျမယ့် 2020 စီးချင်းတိုက်ပွဲ
ဒီနှစ်လည်း AMD ဗိုလ်စွဲမယ်လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား? R&D (Research and Development) အပိုင်းမှာ အသေချာ အရှိန်ယူလာပြီးတဲ့နောက် PC ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ Intel ၊ Nvidia တို့တတွေကို အလှဲထိုး ချီတက်လာတယ် (သွယ်ဝိုက်ပြောရင်တော့ စျေးကွက်လုတယ်ပေါ့) တကယ်က အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။
ကွင်းဆက်ပြန်ဆက်ရရင် AMD ဝှက်ဖဲကို ဟိုကောင်တွေ သိနှင့်ထားပြီးသား၊ 7nm Node မှာ Performance တိုးမလား စွမ်းအင်ခြွေတာမလား၊ ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်တဲ့အကွက်ကို Intel ၊ Nvidia တို့ ကြိုမြင်ပြီးသား။ ဒါမယ့် အင်တဲဘိုးအေကြီးက 10nm က မဆင်းတဲ့အပြင် 10th Gen Ice-Lake တွေကို Tik-tik Tok ဆိုပြီး လုပ်ချပစ်တယ်။
ကောလာဟလတွေအရ i9-10980HK 45W Chip ဟာ Gaming Processor တွေထဲမှာ 5.3GHz Boost နဲ့ အမြန်ဆုံး Speed ကို ရထားတယ်။ 3.1GHz Base Clock (16MB L3 Cache) နဲ့ Ryzen74800H ကို Single-core ရလာဒ်မှာ 6321 Vs. 5228 ၊ Multi-core မှာ 32038 Vs. 31614 နဲ့ နှာတဖြား အနိုင်ယူထားတယ်။
Intel is King when it’s come to Gaming (Credit: LinusTechTips)
Intel အတွက်တော့ Achievement လို့ ပြောရမယ်ပေါ့၊ ဒါမယ့် Performance per Watt ပြန်တွက်ကြည့်ရင် သုံးချိုးတစ်ချိုး အနေထားမှာ ရှိတယ်။ Sony ၊ Microsoft တို့ကလည်း မျိုးဆက်သစ် Console တွေမှာ ပါဝင်လာမယ့် Radeon နည်းပညာသစ်သုံးဖို့ တာဆူနေပြီး ကောလာဟလတွေအရ RTX 2070 Super ထက် ပိုမြန်မယ်လို့ သိနေရတယ်။
နောက်ကွယ် အကြောင်းပြချက်က RDNA2(Radeon-DNA) ဝှက်ဖဲပဲ ဖြစ်ပြီး သိရသလောက်ဆိုရင် 50% စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလာဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်။ အထူးသဖြင့် Hardware-based Ray Tracing (RT) ပါဝင်လာပြီး Nvidia နဲ့ယှဥ်ရင် Performance per Watt/Dollar ပိုသာဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။
NAVI 2X လျှို့ဝှက်နာမည် အဓိပ္ပာယ် ဖော်ဆောင်ရင် RDNA (NAVI) ထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်မယ်၊ TSMC (Taiwan Semi-conductor Company) ရဲ့ 7nm+ Node ပေါ်မှာပဲ တည်ဆောက်ထားပြီး Zen2Architecture နဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Ryzen74000 Series တွေလို Close-gap မရှိအောင် ဖိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်။
လတ်တလော မြင်ရနိုင်တာတော့ RX 5950 XT ကတ်ပဲ ဖြစ်ပြီး အာကျယ်၊ အာကျယ် လုပ်မယ့် Ampere ပါးစပ်ပိတ်ဖို့ Monstrous Specs နဲ့ လာဖို့ရှိတယ်။
Highlight လုပ်ရမယ်ဆိုရင် 5950XT မှာ
320 TMUS/96 ROPS units
384-bit Interface နဲ့ Run မယ်
Desktop Class Graphics Card တွေထဲမှာ Powerful အဖြစ်ဆုံးကတ်လို့ ရည်ညွန်းနိုင်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ ဖိအားပေးမယ့် RTX 3080 ၊ 3070 တွေကို ဆွံ့အထားနှင့်ပါပြီ
GA103 (RTX 3080)
20GB GDDR6, 3840 Cuda Cores, 60 SMs, 320-bit Interface
16GB GDDR6, 3072 Cuda Cores, 48 SMs, 256-bit Interface ဆိုတော့ ကတ်ထွက်လာရင်တော့ ပြောလို့ပိုကောင်းမယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခေါင်းစီးချထားသလို ဝှက်ဖဲက ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးလက်နက် ရည်ညွန်းသလို Nvidia တန်ပြန် တိုက်စစ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတယ်။ အွန်လိုင်းမှာပဲ ပြုလုပ်သွားနိုင်တဲ့ Digital-only GTC (Nvidia GPU Conference) မှာ GA100 (Code-name) စောင့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Forecoming Ampere (Image: Tweaktown)
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ Titan မဟုတ်တဲ့ HPC ၊ Data Centre Class GPU လို့ ထင်ကျေးပေးနေတယ်။ 7nm Node ကို အခြေခံ ထွက်ရှိလာမယ့် Ampere မျိုးဆက်သစ် Nvidia GPU ထဲမှာ အမြင့်ဆုံး ဒါမှမဟုတ်
2GHz (2.2GHz Boost) Memory Speed (Oh..hell)
48GB HBM2e Memory ပါမယ့်ကောင်ပါ
Nvidia အနေနဲ့လည်း အမ်ပီယာတွေဟာ Turing Architecture ပေါ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RTX 20-sereis ၊ 16-series တွေထက် 75% ပိုမြန်မယ်။
FinFET vs. EUV-based 7nm War
ဒီတော့ 7nm တိုက်ပွဲမှာ TSMC Support နဲ့ ကိုက်ကျတော့မယ့် AMD နဲ့ Nvidia။ အသေချာ ပြောနိုင်တာက ၂၀၂၀ ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာ Desktop Class Graphics ကတ်အသစ်တွေကို AMD ၊ Nvidia တို့ဆီက မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး 10th Gen Ice-lake ၊ Ryzen74000 Series Processor တွေနဲ့ Coupling လုပ်ကြမယ်။
Intel တစ်ကောင်ပဲ 10nm မှာ တစ်နေပေမယ့် နှစ်လယ်ပိုင်း အပီဆွဲကျမယ့် Ground Battle က ကြည့်ကောင်းမှာပါ။ Consoles နဲ့ Laptop တွေအတွက်က ကာလတစ်ခုအထိ စောင့်ရနိုင်ပြီး RDNA2၊ Ampere Mobile GPU တွေကို ၂၀၂၀ စတုတ္ထနှစ်ဝက် (အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ) ဒါမှမဟုတ် ၂၀၂၁ မှ မြင်ရနိုင်မယ်။
ကောလာဟလတွေအရဆိုရင် PS5 ၊ Xbox Console အသစ်မှာ သုံးလာမယ့် Custom Radeon GPU ဟာ RTX 2080 Ti ကို မကျော်သေးဘူး၊ ဒိအတွက် Super Mobile GPU သစ်တွေကို မိတ်ဆက်လာနိုင်ပြီး တစ်ခါက ကျနော်ဖော်ပြဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးမှာလို RTX 2080/2070 Super Mobile အပြင် Max-Q Version လည်းလာမယ်။
RTX 2080 Super Mobile (150W) [3072 Cuda, 1365 ~ 1560 MHz]
RTX 2080 Super Mobile Max-Q (80W) [ Unknown ]
RTX 2070 Super Mobile (115W) [2560 Cuda, 1140 ~ 1380 MHz]
RTX 2070 Super Mobile Max-Q (80W) [ Unknown ]
GTX 1650 Ti Super Mobile (TGP: Unknown)
အဲ့တော့ 150W TGP ဆိုတာ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး 150 ~ 220W အတွင်းသွားနိုင်တယ်၊ RTX 2080 Mobile (215W) နဲ့ သိပ်မကွာဘူးဆိုမယ့် Cuda Count ၊ Memory Speed ယှဥ်ရင် 2944, 1380 ~ 1590 MHz ဆိုတော့ Marginal ပဲ ရှိမယ်။
RTX 2070 Mobile (115W) မှာလည်း 2304 Cuda, 1215 ~ 1440 MHz Gap ဆိုတော့ Notabig Surprise လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေ လာတော့မယ်။
၂၀၂၀ ဒုတိယသုံးလပတ် (ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်) မှာ 10th Gen (Core i7-10750H ၊ Core i5-10500H) Mobile Processor မိတ်ဆက်ဖို့ရှိနေသလို Nvidia ကလည်း RTX 20-series Super ကတ်တွေ ချပြမယ်။ တဖက် AMD ကလည်း Ryzen74000 Series Processor တွေကို Radeon 5000 Series ဒါမှမဟုတ် Nvidia GPU နဲ့ Laptop တွေမှာ တိုက်ကြဦးမယ်။
Super ကတ်ထွက်လာလို့ Mobile Graphics ပါဝါ ပိုတိုးသွားမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ 10th Gen Intel ဖြစ်သွားမယ့်အပြင် Performance per Watt ၊ per Dollar စကားပြောသွားမယ်၊ စျေးချင်းတူရင် စွမ်းဆောင်ရည် ကွာသွားမယ် (အများကြီး မဟုတ်ဘူး)
အဲ့တော့ ဂွပ်ကျအောင် လုပ်ကြဦးမယ့် Intel ၊ Nvidia တို့က Ampere တွေ Mobile မဖြစ်ခင် ဂျင်းသိပ်ဦးမလား မပြောတတ်သေးဘူး။ ဒါမယ့် Ryzen74000 Series စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြဖူးသလို Mobility + Performance အဆင့်မြင့်ချင်သူတွေ ရွေးချယ်နိုင်တယ်။
Graphics ပိုင်းမှာတော့ များများစားစား ရွေးစရာ မရှိသေး။ COVID-19 နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတော့ မိတ်ဆက်ပွဲတွေ ကြန့်ကြာနေသလို Laptop Battle က ငြီးစိစိနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းနေဘူး။
ဒါပေမယ့် အရှိန်ယူထားတဲ့ စီးချင်းတိုက်ပွဲက မိုက်နေပြီ။ 10th Gen Mobile Intel Vs. Ryzen74800 Series ၊ Nvidia RTX Super Mobile Vs. Radeon Mobile 5000 Series ပုံစံသွားဖြစ်နေတယ်။ ဇာတ်ရှိန်တက်အောင် ဖန်နေတာ ပြိုင်ဖက် ၃ ဖော်ဆိုပေမယ့် ဂိမ်မာတွေ (သုံးစွဲသူတွေ) လည်း ခေသူမဟုတ်။
AMD still can’t beat the shit
မျိုးဆက်သစ် Graphics Card တွေမလာခင် ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ လ ကာလမှာ ထိပ်ဆုံး နေရာယူထားသူက GTX 1650 နဲ့ 1660 Ti ကတ်တွေ၊ 7nm Node နဲ့ ထွက်ရှိထားတဲ့ Radeon 5300/5500 Mobile GPU တွေက Cheap ဖြစ်ပေမယ့် AMD မစွမ်းဆောင်နိုင်တာ Marketing အပိုင်းပဲ။
၄ နှစ်ဆက်တိုက် Consumer King ဖြစ်ခဲ့တဲ့ GTX 1060 ကို ရိုက်ချတာ Radeon မဖြစ်ခဲ့သလို Graphics Performance ဇယားမှာ Class2အမျိုးစားက ခုထိမဆင်းသေဘူး။ Consumer တွေအနေနဲ့လည်း Mid-range ကတ်တွေဖြစ်တဲ့ GTX 16-series ကို ပစ်မှတ်ထားသလို High-end တန်းမှာ RTX 2070 က ဝယ်လိုအားများတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေ အဆိုရ သိရတယ်။
2020 CES မှာ Budget Friendly ကတ်တွေဖြစ်တဲ့ Radeon RX 5600 XT ၊ 5700 XT တို့ ခေတ်ထခဲ့ပေမယ့် Nvidia ကို မကျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပထမသုံးလပတ် (ဇန္နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မတ်) ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ Nvidia ဝင်ငွေကောင်းနေဆဲဖြစ်သလို ဆောက်နဲ့ထွင်းထွင်း အရာမထင်သလို ဖြစ်နေရတဲ့ AMD လုံ့လက Marketing အပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်ရှိနေသလို ထောက်ပြလာတယ်။
Intel Xe DG1 is good to be dead
ဘိုးစဥ် ဘောင်ဆက် AMD နဲ့ Nvidia GPU သုံးလာတာကိုမှ ရူးသလို ၊ ကြောင်သလိုနဲ့ Discrete Graphics ကို 2020 CES ပွဲမှာ ကြေညာခဲ့တာ Intel ပါ။ ပြောရင်တော့ Kaby Lake-G Fail လို့ ဒုတိယ မျိုးဆက်အနေနဲ့ ထွက်လာတယ် ပြောရင် မမှားဘူး။
Xe DG1 နဲ့ ကိုယ့် Product ကို ပြန်သတ်ပြီး Disteny2ကို 1080p 60fps ကစားပြခဲ့တဲ့ Intel Mobile Graphics Card က Benchmark ရလာဒ်တွေမှာ ၆ နှစ်လောက် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ GTX 880M ထက် ပိုနှေးတယ်လို့ ထွက်လာတယ်။
Intel Project Athena is Dead Too
Athena ဆိုတာတော့ ဂရိလိုပြောရင် Poesidon မိဖုရား အလှဆုံး အချစ်နတ်သမီးပေါ့။ ပညာအရာမှာလည်း အတော်ဆုံးဖြစ်လို့ အစွဲပြုပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Project ဟာလည်း ၂၀၂၀ မှာ မျှောလင့်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။
ဘယ်လို Fail ပါတယ််ပြောပြော Personally စျေးသက်သာတာနဲ့ Performance ကောင်းတာ ရွေးချယ်ရင် AMD ကို ဦးစားပေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အစွဲချွတ်ဖို့ခက်တယ်။ သူ့ထက်ငါသာ ဘယ်လိုသာအောင် ကျောမလဲ အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ PC ပြိုင်ပွဲကို နားထောင်လို့ ၊ စားမြုပ်ပြန်လို့ ကောင်းပေမယ့် ဘာဝယ်ဝယ် မတန်သလိုဖြစ်နေတယ်။
နာမည်သစ် Graphics ကတ်တွေကို ၃ လ ၊ ၄ လ တစ်ခါ မိတ်ဆက်နေရင် အပျင်းပြေ ဝယ်သုံးသူတွေ အခက်မတွေ့ပေမယ့် Consumer Market ကတော့ တည်ငြိမ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေယူရာယိမ်းသလို AMD ဖက် ရောက်သွားလိုက် Nvidia ကောက်သုံးလိုက် ဗျာများနေရင် နောက်ဆုံး သွားရည်ယိုရုံမှတပါး ထိုင်သာငေး၊ မြင်သာမြင် မကြင်ရတော့တဲ့ ဘဝမျိုးထဲ ရောက်လာမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော့် Personal အမြင်ကို ထည့်ပြောတာ ဖြစ်ပေမယ့် နှစ်သက်သလို တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခုလို ဖြစ်လာအောင် ချိုးလိုက်တာ Nvidia ၊ AMD တို့ 100% ပါဝင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ နည်းပညာ တဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Game Engine တွေ အဆင့်မြင့်လာသလို RTX 2080 Ti တောင် 60fps မနည်း Run နေရတဲ့ Red Dead Redemption2လို ဂိမ်းမျိုးကို ဘယ်သူမဆို ဖျဲချင်ကြမှာပဲလေး။
Strike, Strike then counter-strike
အဲ့တော့ Powerful Graphics Card တွေ လိုလာတယ်။ သူတို့မှမထုတ်ရင် ဘာနဲ့ သွားဆော့ကျမလဲ? 2013 မှာ Crysis3ထွက်တုန်းက ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် GTX 690 ကတ်ကြီး ခွေးအလှည်းနင်း ဖြစ်ခဲ့တာ မှတ်မိနေတုန်း? ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ RTX 2080 Ti နဲ့ Metro Exdous ကို Ray Tracing ကစားမယ်ဆိုရင် Bottleneck နေတုန်းပဲ။ (Know what that is?)
Dual GPU သုံးထားပြီး DirectX 11 Gaming တွက် Powerful အဖြစ်ဆုံးကတ်ကြီး Crysis နဲ့ တွေ့မှ ခံလိုက်ရတာ။ Ray Tracing ထလုပ်တဲ့ RTX 20-series တွေလည်း Metro ၊ Control နဲ့ RDR2 နဲ့တွေ့မှ တိုင်ပတ်သွားတယ်။
ဒါကြောင့် Visualization တွက် RT ပိုကောင်းဖို့လိုသလို Graphics Engine တွေနောက် အမီလိုက်နေရတဲ့ Ampere ၊ RDNA2၊ NAVI 3X တို့ ဘယ်လိုပဲ စွာနေတယ် ပြောပြော Future Proof မဖြစ်တော့ဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အနေထားနဲ့ အကိုက်ဆုံး Intel or AMD Processor ၊ Nvidia or Radeon GPU သုံးပြီး လိုက်ငမ်းပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
Sources: Wccftech ၊ Tweaktown ၊ Techpowerup ၊ Anandtech ၊ Notebookcheck